Wararka Suuqa Maanta: Labada Manchester oo Barcelona kula Tartamaya Dani Olmo, Heshiiska Youri Tielemans oo istaagay, Iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Labada Manchester oo Barcelona kula Tartamaya Dani Olmo, Heshiiska...
Weeraryahanka Barcelona Ousmane Dembele, ayaa u furan inuu u dhaqaaqo Newcastle United marka uu qandaraaskiisu dhammaado dhammaadka xilli ciyaareedkan. Xiddiga reer France oo 24 jir ah ayaa kooxda reer Catalan ugu biiray heshiis dhan 117 milyan sanadkii 2017. (Goal)
Newcastle ayaa wareysi la yeelatay tababarihii hore ee Roma Paulo Fonseca iyadoo 48 jirka reer Portugal uu u soo baxay inuu noqdo musharraxa ugu horreeya ee beddeli doona Steve Bruce. (Daily Mail)
Milkiilayaasha cusub ee Magpies ma aysan gaarin go’aan kama dambeys ah, in kastoo, tababaraha Belgium Roberto Martinez, tababarihii hore ee Chelsea Frank Lampard, tababarihii hore ee Borussia Dortmund Lucien Favre, Steven Gerrard ee Rangers iyo tababarihii hore ee Bournemouth Eddie Howe ay weli tixgelinayaan. (Theguardian)
Chelsea ayaa xiiseyneysa inay la soo saxiixato weeraryahanka reer Norway Erling Braut Haaland, oo 21 jir ah, kana yimid Borussia Dortmund , sida uu yiri tababaraha Blues Thomas Tuchel. (The Sun)
Manchester City ayaa ugaarsi ugu jirta weeraryahanka Fiorentina ee aadka loo qiimeeyo Dusan Vlahovic oo 21 jir ah ( Manchester Evening News)
Manchester City iyo kooxda ay xifaaltamaan ee Manchester United ayaa labaduba ka fikiraya inay Barcelona kula loolamaan tartanka 23 jirka RB Leipzig iyo weeraryahanka reer Spain Dani Olmo. (Christian Falk on )
Xiddiga qadka dhexe ee reer Belgium Youri Tielemans, oo 24 jir ah, kana tirsan Leicester , ayaa iska diiday dalabka heshiis kordhinta, isagoo heegan geliyay Manchester United, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid iyo Bayern Munich . (90 daqiiqo)
Tottenham ayaa ku biirtay liiska naadiyada sii kordhaya – oo ay ku jiraan kooxaha Premier League ee West Ham – si ay ula socdaan 27 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Genk Paul Onuachu. Naadiga reer Belgium ayaa ku dooneysa £ 20m £ 6ft 7in ciyaaryahanka reer Nigeria. (Daily Mail)
Brighton ayaa fiirineysa weeraryahanka Clermont ee reer Guinea Mohamed Bayo, oo 23 jir ah, kaasoo kooxda Ligue 1 ee Faransiiska ku qiimeysay 10 milyan oo ginni waxaana lala barbardhigay xiddiga Chelsea Romelu Lukaku. (Argus)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Portugal Bruno Fernandes, oo 27 jir ah, ayaa ku hanjabay inuu ka tagi lahaa Kooxda kaddib markii uu maqlay in Manchester United ay ka mid tahay 12 kooxood oo saxiixay soo jeedinta European Super League. (TheAthletic)
Weeraryahanka reer Argentina Paulo Dybala, oo 27 jir ah, ayaa aad ugu dhow inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda Talyaaniga ee Juventus, sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka kooxda Pavel Nedved. (FootballItalia)
Sheffield United ayaa weli xiiseyneysa inay la soo wareegto 22 jirka garabka ka ciyaara ee reer Spain Alex Collado oo ka tirsan kooxda Barcelona ka dib markii ay ku guuldarreysteen inay u dhaqaaqaan xagaagii hore. ( Sport Witness)
Previous articlePaul Scholes oo digniin u diray Manchester United ka hor Kulanka Liverpool ” Waa 4-0 qeybta hore Hadii ay Sidaas kula Ciyaaraan Reds
Next articleUhuru Kenyatta oo digniin horleh ka soo saaray go’aankii maxkamadda ICJ
Dubai (Caasimada Online) – Shirkadda weyn ee dekedaha Dubai ee DP World iyo wakaaladda dowladda Britain u qaabilsan horumarinta maaliyadda ee CDC Group ayaa...
Cristiano Ronaldo oo Xalay si Wanaagsan ula dhaqmay gabar yar oo...
War Xaqiiq Ah: Antonio Conte iyo Manchester United oo Bilaabay Wadahadalo...